तातो पानी पिउने बानी छ भने एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस है | तातो पानी पिउने बानी छ भने एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस है – हिपमत
काठमाडौ। हरेक दिन ८ देखि १० गिलास पानी शरीरको लागि आवश्यक हुन्छ र दिनमा तीन पटक तातोपानी पिउने बा’नी बसाउनुभयो भने तपाईंंको शरीर बि’रामी हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ ।यसका फाइदाहरु :१. तौल कम गराउँछ: तपाईंंको तौल लगातर ब’ढिरह्यो र धेरै को’सिसपश्चात् पनि कुनै अ’सर गरेन भने तातो पानीमा कागती मिसाएर लगातार तीन महिनासम्म पिउने गरेमा तपाईंले फरक अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं स्वास्थ राम्रो चाहनुहुन्छ भने खाना खाएपछि १ गिलास तातो पानी खाने गर्नुहोस् ।
२. चिसो हुनबाट बचाउँछ: यदि तपाईं अस्वस्थ हुनुहुन्छ, छातीको चिसोले स’ताइरहेको छ भने तातो पानी पिउन लाभदायक हुन्छ । तातो पानी पिउनाले गला पनि ठीक हुन्छ । यसको से’वनले आ’राम मिल्छ ।३. महिनावारीको दुःखाइ कम गराउँछ: म’हिनावारीको दुः’खाइ प्रायः महिलाहरुको नियमित कामलाई नै रो’किदिन्छ । तातो पानीले यो दुः’खाइलाई कम गर्न सक्छ । यसरी तातो पानीले पेटको दुः’खाइ कम गर्न मद्दत गर्छ ।४. शरीर सफा गराउँछ: तातो पानी पि’उनाले शरीर सफा गर्नलाई मद्दत मिल्छ । र यसले शरीरका धेरै ख’राबीहरुको सजिलैसँग सफा गरिदिन्छ । तातो पानी पिउनाले शरीरको तापमान बढ्न जान्छ ।
जसले पसिना नि’काल्छ र यसको माध्यमबाट शरीरको वि’कारलाई बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ ।५. अनुहारमा क’लिलोपना आउँछ: तपाईंको अनुहारको छालाले तपाईंलाई दुः’खी बनाएको छ भने चि’न्ताको नलिनुहोस् । आजैदेखि तातो पानी पिउन सुरुवात गर्नुहोस् केही हप्तामै परिवर्तन देख्नुहुन्छ । छालाका अंगहरु नरम हुनेछ र चमक पनि बढ्नेछ ।६. कपालको लागि पनि फाइदाजनक गर्छ: तातो पानी कपाल र छाला दुवैको लागि फाइदाजनक छ । यसले कपाललाई च’मकदार बनाउछ र बढाउन पनि मद्दत गर्दछ ।७. पेटलाई दु’रुस्त राख्छ: तातो पानी पिउनाले पाचन क्रियालाई सहज बनाउँछ । साथै ग्यासको स’मस्यालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
खाना खाएपछि १ गिलास तातो पानी पिउने बानी गर्नुस् । यसो गर्नाले खानालाई छिटै पचाउँछ र पेट हल्का हुन्छ ।८. र’क्त सञ्चारलाई सन्तुलन गर्छ: शरीर सुचारु रुपमा चल्नको लागि रक्त सञ्चार पूरै शरीरमा सही हुन आवश्यक हन्छ । र यसको लागि तातोपानी पिउनु ला’भदायक हुन्छ ।९. ऊर्जा बढाउँछ: सामान्य पानीको तुलनामा कागती राखेर तातो पानी पिउनाले तपाईंको ऊर्जा ब’ढेर जान्छ । र पा’चन प्रणाली पनि सन्तुलन हुनेछ ।१०. जाडोको दुःखाइ कम गर्छ: तातो पानीले जाडोको दु’खाईलाई कम गर्छ । हाम्रो मा’शंपेशीको ८० प्रतिशत भाग मा’शंपेशीले बनेको हुन्छ । तातो पानीले मा’शंपेशीको दुः’खाइ पनि कम गर्छ ।
बिहिबार, पौष ०९, २०७७मा प्रकाशित गरिएको